Villa Lift, Wiishka Guriga, Wiishka Rakaabka - Tianhongyi
Qolka sawirka oo leh lakabyo badan ...Akhri wax dheeraad ah
Qadka timaha, muraayadda, xoqidda. Akhri wax dheeraad ah
Gacan -ku -qabasho siman.Akhri wax dheeraad ah
Suzhou Tianhongyi wiishka Technology Co., Ltd.
Our in Zhangjiagang City, Suzhou, ku xiga Shanghai ee bari, Wabiga Yangtze ee waqooyiga, iyo Suzhou iyo Wuxi ee koonfurta. Waa shirkad ku takhasustay R&D, naqshadeynta, waxsoosaarka, iibinta, saadka iyo A casriyeynta adeegyada isdhexgalka.
WAXAAN NAHAY DUNIDA
Badeecadahayaga Sida ugu-iibinta badan in ka badan 30 waddan iyo gobollada adduunka oo dhan. Tan iyo markii la aasaasay, shirkaddu waxay had iyo jeer ka go'an tahay inay siiso macaamiil adduunka oo dhan aamin, la isku halleyn karo, oo raaxo leh. Waxay u hoggaansan tahay fikradda ku-tiirsanaanta macaamilka, tayada ayaa ku guuleysata suuqa, iyo wada-shaqeynta guuleysiga.
Rakaabka Rakaabka Ele ...
Ammaan ah, lagu kalsoonaan karo oo fudud ...
Wiishka Panoramic wi ...
Gudaha iyo Dibedda Esc ...
Meesha Guuritaanka Kaliya ee ...
Laba Guur guuraya Pr ...
Xiisada Godka Wiishka D ...
Ku -xigeenka Guddoomiyaha Gobolka ...
Waa maxay Waxaan
Wiishka mashiinka oo dhameystiran iyo
soo saaraha qalabka
SIDA AAN U SHAQAYNO
Hufan iyo adeegyo degdeg ah
Waxaan nahay xirfadle ku hawlan qalabka wiishka iyo dhammaystirka cilmi baarista iyo horumarinta mashiinka, naqshadeynta, wax soo saarka, iibinta, saadka iyo adeegyada sida mid ka mid ah shirkadaha casriga ah
Waxaa lagu qalabeeyay qaybaha wiishka oo dhameystiran, iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda koontaroolka ugu dambeysa iyo nidaamka wadista, si isku -darka ugu fiican ee tayada iyo qiimaha.
Suzhou Tianhongyi Elevator Technology Co., Ltd. wuxuu ku yaal Zhangjiagang City, Suzhou, oo ku xigta Shanghai dhanka bari, Wabiga Yangtze ee waqooyiga, iyo Suzhou iyo Wuxi oo koonfurta ah.
Tan iyo markii la aasaasay, shirkaddu waxay had iyo jeer ka go'an tahay inay siiso macaamiil adduunka oo dhan aamin, la isku halleyn karo, oo raaxo leh. Waxay u hoggaansan tahay fikradda ku-tiirsanaanta macaamilka, tayada ayaa ku guuleysata suuqa, iyo wada-shaqeynta guuleysiga. Mashruuca adeegga caalamiga ah oo leh qalab dhammaystiran ayaa ku guuleystay dareenka macaamiisha. Si aan kala sooc lahayn loo ammaanay oo aad loo aqoonsaday.
Iskudar kheyraadka qeybaha wiishashka iyo wiishka iyada oo loo marayo qaab ganacsi oo iskaashi leh, siiya macaamiisha xalal hal-joogsi ah si loo abuuro qiime sare, oo hoggaamiye looga noqdo wiishashka iyo qeybaha korantada ee Shiinaha.
Hadafkayaga ugu dambeeya ayaa ah inaan daboolo baahiyaha macaamiisha caalamka. Waxaan sii wadi doonnaa inaan si adag u shaqeyno si aan qof walba ugu soo bandhigno "xirfadle ah oo u heellan" ruuxa hal -abuurka ah iyo badeecado iyo adeegyo kaamil ah qof walba. Tianhongyi Elevator wuxuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo la -hawlgalayaasha caalamiga ah si loo abuuro mustaqbal isku habboon oo qurux badan. !